Faa'iidooyinka Kooraska Shahaadada MCSE Microsoft Gurgaon | ITS
Faa'iidooyinka MCSE ee Shahaadada Shahaadada
Waa Maxay Faa'iidooyinka Kooraska Shahaadada MCSE?
Waa maxay koorsada Shahaadada MCSE?
Yaa qasab ah in ay qaadaan khatarta?
Faa'iidooyinka Gaaritaanka Maadada Shahaadada MCSE
Waxaad Falanqeyn kartaa Fursadaha Fogaanta leh
Waxaad ka heli doontaa Xirfado Xirfadaha Fudwiska ah
Khabiirada IT-ga waxay u baahan yihiin inay dib u eegaan fikradahooda iyo kartidooda hal mar marba marka adduunka IT-gu mar walba muujinayo calaamadaha isbedelka. Shakhsiyaadka aan sameyneynin waxay ku soo laaban karaan gadaashooda. Mid ka mid ah awooddaas oo kugu sii wadi doona xaalad isdhexgal leh oo sidan si joogta ah u kobcaya adduunka cusub ee hal-abuurka ah Koorsada shahaadada MCSE. Shahaado-sharaxaadku muddo dheer ayuu u aasaasay sida mid ka mid ah xirfadaha ugu baahida badan ee xirfadlayaasha IT-da.
MCSE, Mashiinka Nidaamyada Sameeyey ee Microsoft, waa shahaadada ugu guuleysiga ee ah in Master-ka IT-da uu codsan karo. Waxaa bixiya Microsoft, tan Shahaadada Microsoft waa baahi aad u weyn oo leh qalab loogu talagalay nidaamka iyo injineernimada. Waa qorshe ballaaran oo imtixaanka 7 oo tijaabinaya aragtidaada qaababka kala duwan, tusaale ahaan, Exchange Server, Xarunta System (SCCM) Windows, SQL Server, Sharepoint, iyo Lync.
Dayactirka MCSE oo loogu talagalay tiro badan oo xirfadlayaal IT ah kuwaas oo u baahan inay ka soo qaadaan geeska dadka kale ee dunidan khaldan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira noocyo nuucyo ah oo luminaya wacyi-galin la'aanta shahaadada MCSE-ga, waxaana lagu sheegi karaa:
Maamulayaasha Diiwaangelinta Database
Maamulayaasha SQL Server
Xirfadleyaashan waxay ballaarin karaan qiimaha iyo faa'iidada ayada oo ay si dhab ah u helaan kooras MCSE ah.
Mid ka mid ah wuxuu ubaahan yahay in uu diirada saaro inta uu qaadanayo hantida la qabanayo maadaama dhammaan shirkaduhu ay bixiyaan tababbar nololeed oo ku habboon iyo ujeedo la isku halleyn karo si ay u fekeraan miisaaniyadaha duulaya. Shahaadada ma aha mid fudud oo la soo dhaafay. Wuxuu codsanayaa baadhitaan ballaaran iyo tijaabo si loo xaqiijiyo dhammaan toddobada imtixaan. Sidaa darteed, waxaad u baahan tahay inaad ku tiirsanaato midka ugu fiican. Solutions Technologies Innovative waa hantidaas oo dhistay hidaha asaga oo ka mid ah hababka ugu kalsoonida badan ee lagu iibsado koorsada MCSE.
Wax walba oo la tixgeliyo, shahaadada waxay furi doontaa caalam cusub oo xagjir ah oo cusub. Tusaale ahaan, ka dib markaad sameyneysid MCSE: Infrastructure Server In server 2012 R2 Koorsooyinka Tababarka iyo Shahaadada Shahaadooyinka, waxaad sii ballaarin kartaa xajintaada shaqada waxayna ka shaqeyn kartaa meel u dhow awoodda, nidaamyada nidaamka, qaabaynta nidaamka, maamulka nidaamka iyo maamulka astaamaha ee aan gudaha ku jirin hababkaaga ka hor. Sidoo kale, koorasku wuxuu ku siinayaa si joogto ah oo aad ku heli kartid maadada dariiqa dariiqa daruuriga ah, daruuraha gaarka ah, Sharepoint iyo dhulal kala duwan oo leh shahaadooyinka MCSE-ga ee caadadan.
Warshadaha IT-ga ayaa si gaar ah u codsanaya. Ku dhow, awoodda uu codsanayo waa kudub dhexaadka guddiga. Koorasyada koorsada koorsada koorsada ah iyo koorsada heerka koorsada ah waxay dabooli kartaa ballamadeeda ballaaran. Mid ka mid ah wuxuu ubaahan yahay inuu tago tababarka caawiyaha iyo tababarka MCSE waa habka ugu fiican ee lagu gaari karo. Waxay kugu baran doontaa tiknoolojiyada ilaa daqiiqad-socodka ah oo awood u leh inay xoogga saaraan.
Dhibaatada, qiimaha dhimis iyo jinniyo kala duwan ayaa jira oo ku jira ganacsiga IT kaas oo kaa dhigaya inaadan ku kalsoonaan karin shaqada. Wershada IT-da ma bixiyaan gorgortan si ay u bedesho kooxdeeda haddii aanay ku haboonayn wax intaas ka badan ama dabeecadahooda aan loo cusbooneysiinin sida ku cad qaabka joogtada ah. Xaaladdan oo kale, mid ayaa u baahan inuu yeesho daris dheeraad ah si uu u koro. Tababarka iyo shahaadada MCSE waa qalabka keliya ee aad ku qaadato.
Waxaa macnaheedu yahay in macquulnimada dheeraadka ah ay kordhin doonto tirada nalalka ah ee jeeggaaga. A MCSE caddeeyey xirfadlaha wuxuu shaki ku jiri karaa dhan dhan cajiib ah $ 96,215 sanadkiiba. Waxay sii wadi doontaa balaarinta khibradaada.
Haysashada shahaadada MCSE waa xulashada ugu fiican ee xirfadle kasta oo IT-ga ah oo waligiis samayn doona. Kooraska MCSE waxay qabaan qirasho caalami ah waxayna ku hayaan muhimadda ugu weyn ee duruufaha shaqada ee joogtada ah.
Taariikhda 10 Microsoft Shahaadooyinka laga rabo maanta 2018